Dawladda Itoobiya Oo Xabsiga Ka Sii Daysay Dad Gaadhaya 2,000 Oo Qof | Somaliland Today
← Dal Baaba’ay haddaad aragto, hoggaanka ayaa ka Xumaadey.
Xulka Gobolka Sanaag Oo Guuldarro Xanuun Badan Kala Kulmay Dhigooda Xaysimo →
Dawladda Itoobiya Oo Xabsiga Ka Sii Daysay Dad Gaadhaya 2,000 Oo Qof
(SLT-Addis Ababa)-Xoogagga ammaanka ee dalka Itoobiya ayaa xabsiga ka sii daayay ilaa iyo 2,000 oo qof oo isbuucyadii la soo dhaafay la xiray, sida ay ku warantay warbaahinta xiriirka la leh dowladda ee Fana.
Waxaa dadkaasi horay loogu eedeeyey inay ku lug lahaayeen rabshadihii dalkaasi ka dhacay bilooyinkii la soo dhaafay.
Fana oo soo xiganeyso wasiirka difaaca Itoobiya, Siraj Fegessa, ayaa ku warrantay in dadkaasi la sii daayay ka dib markii sida ay hadalka u dhigtay ay ka waantoobeen khaladaadkii ay ku kaceen.
Wasiirka ma sheegin tirada dadka wali ku harsan xabsiyada dowladda.
20-kii bishan October, in ka badan 2,600 oo qof ayaa la xiray iyadoo loo cugsanayo sharciga deg degga ee dalka lagu soo rogay horrantii bishan ka dib markii ay dhaceen dibedbaxyo lagu diidan yahay dowladda.
Kooxaha Mucaaradka ayaa dalbanaya in la siiyo xorriyad dhinaca siyaasadda ah .
Waxaa dalka Itoobiya ka talinyay xsibiga EPRDF tan iyo sanaddii 1991.
Kooxah xuquuqda aadanaha ayaa horay u sheegay in 500 oo qof ay ku dhinteen dibedbaxyadii socday isbuucyadii la soo dhaafay.